Top 10 Microsoft Certifications amin'ny fangatahana androany amin'ny 2018 | ITS Tech School
Top 10 Microsoft Certifications an-tserasera ankehitriny ao amin'ny 2018
Microsoft Certifications an-tserasera Androany: Ny Windows Windows Framework Framework dia ny fandaharam-potoana fampiasa betsaka indrindra manerana izao tontolo izao ary manana PC maro be mitantana ny OS, dia nanosika ny MS hanangana tononkalo fitaovana fanamafisana ho an'ny server, fampandrosoana fampiharana sy ny sehatry ny rahona mba hanatsarana ny filàna ilaina.
Avy amin'ny fomba fijerin'ny mpikaroka sy ny mpikaroka, ny fanatsarana tanteraka ny iray amin'ireo tsara indrindra sy tena tadiavina ny fanamarinana Microsoft ao amin'ny 2018 dia hanome azy ireo fomba fanao mahomby hampandrosoana azy satria ny tsirairay amin'ireo fianarana ireo dia fantatra amin'ny OS izay namorona ny fikambanana. Azonao atao ny mijery ireo fanamarinana ireo ary mikaroka ireo mety indrindra ho an'ny fanantenana tsara kokoa.
Top 10 Microsoft Certifications amin'ny fangatahana
1. Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE): Infrastructure Server:
Ny MCSE Server Infrastructure dia natao hanamafisana fa ny manam-pahaizana iray dia manana fahaizana manan-danja hanaraha-maso sy hanohizana ny rafitra serivisy maina. Ny olona tsirairay dia hanana fianarana tsara amin'ny toetra sy ny rafitra, ny virtoaly, ny fitantanana ny rafitra ary ny fitehirizana data. Rehefa miasa tanteraka ianao, dia azonao atao ny manamboatra ampahany amin'ny asa ho toy ny manam-pahaizana amin'ny fanohanana na mpanadihady momba ny fiarovana. Tsy maintsy mamarana fisedrana tokana dimy mitadidy ny tanjona farany mba hahafeno fepetra.
Tao anatin'ny fotoana izay nampivelatra ny apps versatile, ny fametrahana ny mari-pamantarana MCSD dia manamarina fa ny mpihazona testamenta dia mpamokatra fampiharana manam-pahaizana izay afaka manao fampiharana portable amin'izao fotoana izao. Azony atao ihany koa ny manangana tranonkala, fitantanana fototra ho an'ny teknolojia vaovao. Ny tetikasa dia manantena anao hamita taratasy iray ao amin'ny Universal Windows Platform sy ny fanamarinana App Builder mialoha ny hikatsahana lohahevitra vaovao hanitatra bebe kokoa.
Ny vahaolana farany indrindra amin'ny fandaharam-potoana, azo atao ny fanamarinana MCSA ahafahan'ny manam-pahaizana ho tompon'andraikitra amin'ny fifampiraharahana amin'ny Windows Server 2016 sy ny fomba fiasa mifandraika amin'izany. Ny lehilahy iray izay mamita tanteraka ny fianarana dia ho azo antoka fa nahazo ny fianarana ny fitantanana ny tambazotra, ny fitantanana ny serivisy ary ny fiarovana. Ny famerenana 2016 dia mamelombelona ireo izay efa manana ny fankatoavana miaraka amin'ireo hevitra vaovao sy ny famolavolana programa vita amin'ny Windows Server. Hatramin'ny farany, Microsoft dia manana ampahan-javatra isan-karazany manome fanitarana bebe kokoa handany fotoana manan-danja eo amin'ny manodidina anao amin'ny manodidina anao. Raha toa ka mikasa ny hanafina azy rehetra ianao, dia ilaina ny manao ny lahasa rehetra mifandraika amin'ny Windows Server miaraka amin'ny tanjona voafaritra tsara mba hahafeno fepetra amin'ny sehatra voafantina.
Amin'ny famaranana ny mari-pahaizana MCSE amin'ny Daty Platform dia azonao atao ny manambara orinasa mety ho azonao atao amin'ny fitantanana ny server server SQL ary manara-maso ny fandaharanasa momba ny angom-barotra momba ny raharaham-barotra izay manelingelina ny hafa. Ny fanamarinana koa dia manambara amin'ny fikambanana fa ny tompon'ny fanambarana dia afaka mahavita manara-maso ny raharaham-barotra na amin'ny rahona na eny amin'ny trano. Tokony ho vita ny fikarakarana fitsapana dimy miavaka ary afaka mandany fotoana manan-danja ao amin'ny faritra manodidina anao ianao amin'ny alalàn'ny intrigue fantatra amin'ny SQL Server.
5. Microsoft MCSE: Cloud Platform sy Infrastructure
Manana porofom-pitandremana goavana i Microsoft mba hahatonga ny olona hanana traikefa azo antoka momba ny fampivoarana. Ny Cloud Platform sy Infrastructure dia miantoka fa afaka mamaha ny olana amin'ny rahona sy ny fifantohana amin'ny data mora ampiasaina amin'ny Microsoft amin'ny fampiasana ny fandrosoana isan-karazany. MS Azure dia toeram-pivarotana lehibe indrindra amin'ny fandrindrana ny rahona nomena ho an'ny mpanjifa ary amin'ny fahazoana ny testamenta, azonao atao ny mampitombo ny lanjan'ny fikambanana ary miatrika ny fananany.
6. Microsoft System Center - Fanaraha-maso Manager Configuration Manager sy Intune
Rehefa manaiky ny hanaiky ny Administrateur Configuration Manager sy Intune ny Administering, dia hanome fampahafantarana mahasoa momba ny sehatra samihafa ao amin'ny drafitra fandaminana sy ny Microsoft Intune programa ny fianarana. Mampiditra ny vaovao momba ny fomba tsara indrindra hiatrehana ny fandraisana andraikitra isan'andro, ny fitantanana programa, ny fitazonana ny tahiry ho an'ny fitaovana, ny fandaharana, ny fikarakarana ny fampiharana ary ny fandrindrana ny angon-drakitra novokarin'ny Intune. Ny fanamarinana dia mitantana ny tsy fitoviana, ny filaminana farany ary ny fanaovana tatitra.
7. Microsoft Exchange Server: Famoronana sy fametrahana Microsoft Exchange Server 2016
Ny lozam-pampandrosoana lavabe atolotr'i Microsoft dia ny fiantsoana tombom-barotra mahomby ho an'ny olona mikaroka izay mety ho toeram-piompiana. Rehefa manatanteraka io testamenta io tanteraka ianao dia mampitombo ny sandan'ny fandaminao amin'ny alàlan'ny fananana fahaiza-manao hananana Microsoft Exchange Server 2016 araka ny voalaza amin'ny filàna manokana ary handefa izany. Ny mpangataka iray dia tokony hanana traikefa telo taona mahery miaraka amin'ny servisy Exchange ary rehefa mamita ity iray ity izy ireo, dia hanana ny fahaizana hitarika ekipa iray miaraka amin'ny fianarana voavolavola amin'ny alalan'ny taratasy fanandramana samihafa izay ampahany amin'io dingana io.
8. Microsoft Office 365: Fanomezana sy fanamariana Office 365
Ny Office Office izay nirotsaka ho fandaharan-tany mahaleo tena dia nanjary lasa fitantanana mifototra amin'ny mpikambana ao amin'ny Microsoft Office 365. Ireo manam-pahaizana IT dia afaka mahafantatra ireo rehetra amin'ny alalan'ny programa Office 365 ahitana ny fepetra, ny zavatra ilaina ary ny maha-izy azy. Rehefa manana fianarana be dia be izy ireo amin'ny fanohanana ny fandrosoana ary afaka manadihady tanteraka ny mety ho vokatr'ilay programa dia afaka mampiasa Powerpoint, Excel, Word amin'ny tetikasa isan-karazany. Ankoatra izany, dia fandaharam-pampianarana fototra ary tsy dia misy dikany loatra ny fanoherana mifanohitra amin'ny server SQL hafa sy ny testamenta Azure Cloud izay azonao atao amin'ny famaranana ireo zavatra ilaina.
Alohan'ny handraisanao ny fanadinana momba ny mari-pahaizana Microsoft amin'ny ASP.Net, dia tsy maintsy atao ny tsy fandraisana anjara mavitrika mandritra ny dimy taona. Amin'ny tsy fahafahana namorona programa mampiasa ASP.Net ary angamba angamba mpivady efa ela niainana ny nitifitra ny fandaharam-potoana nifanaovana tamin'ny MVC, dia tokony ho kely dia kely ny mitaky ny fanamarinana ny MVC 5. Ny fanambarana dia manome fampahafantarana mikasika ny famolavolana, ny fampitaovana ary ny fananganana ny fihaonana amin'ny mpanjifa amin'ny fampiasana ny fitaovana famokarana. Toy ny fandaharana maro hafa momba ny fanamarinana, mila mandroso ny fivoaran'ny taratasy fanandramana miaraka amin'ny tanjona voafaritra tsara ianao mba hahafeno fepetra manokana momba izany. Raha mitaky fampahalalana marobe amin'ny .Net, ASP.Net sy MVC 5 miaraka amin'ny fotoana iray, dia heverina ho manana olana lehibe kokoa ary mety ho an'ny manam-pahaizana matihanina maniry ny hanampy ny fiantsoana azy ireo.
Rehefa mahafeno ny mari-pahaizana MCSA ao amin'ny SQL Server 2016 ianao, dia takatr'izy ireo fa ianao dia hanana fanazavana manokana momba ny raharaham-barotra SQL momba ny rahona sy ny toeram-pitsaboana araka ny antenain'ny fikambanana. Ny Microsoft dia toy ny ampahany faramparany ny fanamarinana ho modely samihafa nampitombo ny SQL 2016 fanatsarana, ny fitantanana Database sy ny BI Development. Ny manam-pahaizana manokana momba ny SQL dia manana fahaizana manokana amin'ny sehatra iray manokana ho an'ny ampahany betsaka amin'ny sehatry ny asa sy ny fampandrosoana amin'ny fiantsoana na afaka manandrana fitsapana maro samihafa amin'ny toe-javatra izay azon'izy ireo atao amin'ny tsy fisian'izany.
Tari-dàlana fanombohana ho an'ny Windows Server Certification: MCSA, MCSE ary MTA
Tombontsoa ho an'ny mari-pahaizana momba ny mari-pahaizana MCSE